सुमेरू मञ्चमा वाक निषेध – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsसुमेरू मञ्चमा वाक निषेध
सुमेरू मञ्चमा वाक निषेध
May 25, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङ, 25 मई 2017
पर्यटन मौसमभरि दार्जीलिङ शहरको मुटु चौकबजार वा सुमेरू मञ्चमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको जनसभा नहोस् भन्ने दार्जीलिङ जिल्ला प्रशासनको प्रस्तावमा दार्जीलिङका राजनैतिक पार्टीहरुको मतभिन्नता स्पष्ट भएको छ। आज दार्जीलिङ जिल्ला प्रशासनले जिल्लापाल कार्यालयमा सुमेरू मन्चको साटो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनको मैदानमा जनसभा गरिदिनुपर्छ साथै अन्य कतिपय विषयलाई लिएर एक सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेको थियो।
तर यस प्रस्तावलाई कतिपय पार्टीले समर्थन जनाएका छन् भने कतिपय पार्टीले यसको ठाड़ै विरोध जनाएका छन्। जसमध्ये दार्जीलिङ हिल तृणमूल काङ्ग्रेसले जिल्ला प्रशासनको यस प्रस्तावको विरोध जनाउँदै भनेको छ-गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनको मैदान एउटा संस्थाको निजी जमीन हो।
दार्जीलिङ हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका कार्यकारी अध्यक्ष एनबी खवासले भने-गिताङ्गे डाँड़ा वा सुमेरू मन्चको आफ्नै गरिमा र इतिहास छ। यसैले एउटा निजी संस्थाको जमीनलाई राजनैतिक पार्टीहरूले प्रयोग गर्न शुरू गरेपछि यो जमीनको बिस्तारै दुरूपयोग हुनसक्छ। यसैले सुमेरू मञ्चमानै जनसभा हुन दिनुपर्छ। यदि सुमेरू मञ्चमा जनसभा हुन नदिनु हो भने यसलाई किन मरम्मति गर्नु? यस स्थानमा जनसभा गरोस् भनेरनै यसको मरम्मति गर्ने कार्य गरिएको होइन? यसैले दार्जीलिङको इतिहासमा भाषण गर्ने यस स्थानमानै भाषण गर्न दिनुपर्छ। गोदुनिसको मैदानमा होइन।
यसरीनै आजको सर्वदलीय बैठकमा गोजमुमोले अंशग्रहण नगरे पनि यसबारे गोजमुमो सहसचिव विनय तामाङसित सोध्दा उनले भने-दार्जीलिङको शान्ति श्रृङ्खलालाई बँचाइराख्नको लागि सबै राजनैतिक पार्टीहरुले ध्यान दिनैपर्छ। यसैले जनसभा कहाँ गर्दा जनतालाई सुविधा पर्छ, यस विषयमा पनि सबै राजनैतिक पार्टीहरुले बुझिदिनुपर्छ। यसैले जिल्ला प्रशासनको प्रस्तावमा सबै राजनैतिक पार्टीहरुले मनन गर्न आवश्यक छ। किनभने, यो पर्यटन मौसमभरिको लागि मात्रै हो। यदि यहाँ जनसभा गर्दा पर्यटन मौसमको समय स्थानीय जनता र पर्यटकहरुलाई असुविधा हुन्छ भने यसमा सबै पार्टीले उचित निर्णय लिएको उत्तम हुनेछ। यसरीनै गोरामुमोले पनि पर्यटन मौसमको समय सुमेरू मञ्चमा कुनै पनि पार्टीले जनसभा नगरेकोनै उचित हुने बताउँदै जिल्ला प्रशासनको प्रस्तावलाई गोरामुमोले पूर्ण समनि जनाउने पार्टी नेता वाई. लामाले बताए।
आज यहाँ दार्जीलिङका महकुमा अधिकारी ए. च्याटर्जीको अगुवाईमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो, जसमा महकुमा अधिकारीले दार्जीलिङमा शान्त बनाइराख्न अनि विशेष कुनै पनि पार्टीले राजनैतिक जुलूसहरूमा विद्यार्थीहरुलाई सहभागी नबनाउने पनि अपील गरे। तर आजको यस सर्वदलीय बैठकमा गोरामुमो, जनआन्दोलन पार्टी र गोरामुमोबाहेक अन्य कुनै पनि दलले भाग लिएको थिएन।
ममता अघि नै विमल गुरूङ मिरिक जाने
बलात्कारीलाई 10 वर्षको कारावास